2019-12-02 16:20:15 , Certificate in Applied HR Man…
? Certificate in Applied HR Management ?
? HR ပညာရပ်ကို အခြေခံကျကျ သိလိုသူများ၊
? HR တစ်ယောက်အဖြစ် ရပ်တည်လိုသူများ၊
? HR သင်တန်းတွေကတော့ တက်ပြီးပြီ ဒါပေမယ့် လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း ဘယ်လို Applied လုပ်ရမယ်ဆိုတာမသိ ဖြစ်နေသူများအတွက် "Certificate in Applied HR Management" ရုံးချိန်လွတ်အတန်းလေး ဖွင့်လှစ်ပေးလိုက်ပါပြီ … ။
? HR Career နဲ့ မိမိကိုယ်ကို ယုံကြည်မှုအပြည့်ဖြင့် အလုပ်ဝင်လိုသူများနဲ့ ၀န်ထမ်းရေးရာကို စနစ်တကျ စီမံခန့်ခွဲလိုတဲ့ လုပ်ငန်းရှင်များ ဒီသင်တန်းကို မဖြစ်မနေတက်ရောက်ကြဖို့ ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်နော် … ။
? သင်ကြားပေးမယ့် ဆရာကလည်း HR နယ်ပယ်မှာ လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံများစွာရှိတဲ့ ဆရာဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒါကြောင့် ဒီသင်တန်းမှာ စာတင်မက လုပ်ငန်းခွင်အတွေ့အကြုံတွေကိုပါ မျှဝေပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက် လုပ်ငန်းခွင်အသိပညာများစွာကို ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။
? HR ပညာရပ်ကို စိတ်ဝင်စားသူ ညီငယ်/ညီမငယ်များ၊ HR ပညာရပ်ဖြင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုရန်အတွက် သင်တန်းတက်ဖို့ စီစဉ်နေသူများ၊ ၀န်ထမ်းများကို စီမံခန့်ခွဲနေရသည့် လုပ်ငန်းရှင်များကို WRBS မှ လှိုက်လှဲစွာ ကြိုဆိုနေပါတယ် … ။
?‍? သင်ကြားပေးမည့်ဆရာ ?‍?
" ​ဒေါက်တာစိုင်းနေလင်း "
? သင်တန်းစတင်မည့်နေ့ ?
( ၁၆.၁၂.၂၀၁၉ ) မှ ( ၂၀.၁၂.၂၀၁၉ ) ထိ
⏰ သင်တန်းအချိန် ⏰
ညနေ (၆) နာရီမှ (၈) နာရီထိ
? သင်တန်းကြေး ?
?? သင်တန်းပြီးဆုံးပါက ပြီးမြောက်ကြောင်း အောင်လက်မှတ် (Certificate) ထုတ်ပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ??
? ပါဝင်မည့်ဝန်ဆောင်မှုများ ?
? Aircon ခန်းထဲတွင် ​​တစ်ဦးခြင်း ဂရုတစိုက် သင်ကြား​ပေးမှာဖြစ်ပြီး၊
? မုန့်၊ ကော်ဖီ၊ အအေး
? စာရွက်၊ စာတန်းများ အပြင်
? တစ်ဦးချင်းအလိုက် ပညာရေး၊
အလုပ်အကိုင်ရေးရာများကို စိတ်တိုင်းကျ တိုင်ပင်နိုင်ခြင်း
?သင်တန်းတက်ရောက်သူများကို အလုပ်အကိုင် (အခမဲ့) ရှာဖွေပေးခြင်း စသည့် ဝန်ဆောင်မှုများလည်း ရှိပါသည်။
? လူဦးရေကန့်သတ်သင်ကြားပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက် သင်ကြားပေးမယ့်ဆရာနဲ့ အနီးကပ်ဆွေးနွေးနိုင်ခွင့်ရှိပြီး မိမိတွင်ရှိနေသော အရည်အသွေးများကို အချိန်တိုအတွင်း ငွေကြေးအကုန်အကျနည်းစွာ အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ဖို့အတွက် အမြန်လာရောက်အပ်နှံဖို့ ဖိတ်ခေါ်ပါရစေ။ ?
? သင်တန်းစုံစမ်းရန် ?
? White Richmond Business School ?
အိမ်နံပါတ် (ဓ-၃/၂၈) ၊ ၄၀ x ၄၁ ကြား၊ ၆၅ x ၆၆ ကြား၊ နဝရတ်လမ်းသွယ်၊ မဟာအောင်မြေမြို့နယ်၊ မန္တလေးမြို့။
Website ▶ www.whiterichmond.com
Facebook Page ▶ https://www.facebook.com/whiterichmond.business.school/
This entry was posted in Training and Class on 2019-12-02 by admin.
← 2019-12-02 15:35:17 , ကျေးဇူးဆိုတာ သိတတ်​ဖို့ နားလည်… 2019-12-02 18:03:14 , #Sharing_Accountancy_Training_… →